Gabadhii muslimtay buuq la xiriira oo baarlamaanka Talyaaniga ka dhacay – Radio Damal
Gabadhii muslimtay buuq la xiriira oo baarlamaanka Talyaaniga ka dhacay
Xildhibaan ka tirsan garabka midig ee dalka Talyaaniga ayaa kalsoonidii lagala noqday Arbacadii kaddib markii uu “Argagixiso cusub” ku tilmaamay haweeney da’ yar oo u dhalatay Talyaaniga, taasoo diinta Islaamka qaadatay intii ay afduubka u heysteen koox Soomaali ah.
Alessandro Pagano, oo ah mudane baarlamaanka xisbiga qaxootiga neceb, ayaa canaan weyn kala kulmay xildhibaannada kale kaddib markii uu soo hadal qaaday Silvia Romano mar uu ka cabanayay diidmada ay dowladda ilaa hadda ku furi la’dahay kaniisadaha, xilligan lagu jiro xayiraadda uu sababay cudurka coronavirus.
Pagano wuxuu sheegay in “fikir diin naceyb ah” uu ku jiro xukuumadda isbahaysiga ah ee hadda dalka Talyaaniga maamusha, wuxuuna intaas ku daray in “sidaasoo ay tahay markii ay gabadha argagixisada cusub ah markii ay dalka dib ugu soo laabatayna…”
Hadalkiisa ayaa u muuqday mid uu ku durayay go’aanka ay Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ku salaameen Silvia Romano , islamarkii ay garoonka diyaaradaha kasoo dagtay.
Hase ahaatee, sii hayaha xilka guddoonka shirka baarlamaanka, Mara Carfagna, ayaa durba si dhakhso ah hadalka uga xiray Pagano, isagoo dhahaya: “Adeegsiga erayga ‘argagixiso cusub waa khalad, gaar ahaan golahan dhexdiisa'”.
Xildhibaanka kasoo jeeda xisbiga Dimuqraaddiga ah ee lagu magacaabo Emanuele Fiano , ayaa isagana hadalka qaatay oo aad u cambaareeyay Pagano, isagoo ku canaananaya eedeynta uu u jeedinayo gabadha dhibbanaha ah ee ay afduubka ku heysteen koox argagixiso lagu tilmaamo.
Pagano ayaa markii dambe is difaacay, isagoo sheegaya inuu hadalkaas kasoo xigtay wargeys.
“Qof walba oo faafinaya warar ku saabsan iyada, ha sheego in in iyadoo 23 jir ah lagu afduubtay Kenya, lagu khasbay inay dhul howd ah ku lugeysto sagaal saacadood maalintii, oo waliba qori caaraddiis lagu khasbayay,” ayuu yiri Conte oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyay hadallada naceybka ah ee lafa faafinayo haweeneydaas.
Giuliana Sgrena, oo ah wariye u dhalatay Talyaaniga oo Ciraaq lagu afduubtay sanadkii 2005-tii ayaa sheegtay inay eedeymo badan la kulantay markii ay dib ugu laabatay waddankeeda, maadaama askari Talyaani ah lagu dilay howlgalkii lagu soo badbaadinayay iyada.
“Way iska caddahay in la xagxaganayo marba haddii ay dumar tahay qofka la afduubtay,” ayey tiri iyadoo la hadleysay Idaacadda RSI.
“Ma jiro qof cabanaya markii lacag madax furasho ah laga bixiyo nin la afduubtay, ama uu nin aado meelaha noocaasoo kale ah. Laakiin markii ay haweeney tahay, waa sidii annagoo afduubka raadsannay oo kale.”
Silvia Romano, 25 jir ah waxay Aaxaddii ka dagtay Talyaaniga iyadoo xiran xijaab hagaaran, oo u eg haweeney Soomaali ah.
Sii deynteeda oo iyada iyo qoyskeedaba farxad weyn u ahayd ayaa lagu hareeyay muran la xiriira fikirka ay qaadatay intii ay xirneyd, iyadoo dadka waddankeeda u dhashay ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen.
Booliska ayaa loo yeeray kaddib markii la sheegay in galaas dhalo ah lagu tuuray guriga ay iyada iyo qoyskeeda ka daggan yihiin magaalada Milan.Hadallada naceybka loogu muujinayo gabadhan ayaa ku baahay baraha bulshada, waxaana inta badan diiradda lagu saarayay go’aanka ay ku qaadatay diinta Islaamka iyo sidoo kale go’aankii ay markii horeba si mutadawacnimo ah uga shaqeyneysay meel ka tirsan Kenya, oo miyi ah, xilligii la afduubanayay sanadkii 2018-kii.
Romano oo 25 jir ah waxay aheyd samafale ka howgeli jirtay xarun lagu daryeelo carruurta agoonta ah oo ku taalla koonfur bari ee Kenya. Koox hubeysan ayaa bishii Nofembar ee sannadkii 2018-kii ka afduubatay halkaas, waxaana loo kaxeystay dhinaca Soomaaliya, waxaana la rumeysan yahay in kooxdii afduubka geysatay ay ka tirsanaayeen Al Shabaab.
Silvia Romano, markii ay Rome ka degtay waxaa soo dhoweeyay oo laabta geliyay waalidkeed iyo walaasheed, waxaana salaamay ra’iisul wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda xilli ay qabtay dhar ku xijaaban.
Markii ay gaartay magaaladii ay ka soo jeeday ee Milan waxay sheegtay in kooxdii afduubatay ay si wanaagsan ula dhaqmeen isla markaana ay xushmad u muujiyeen.